Wararka - CPhI
CPhI waa dhacdo dawooyin la aasaasay oo ka badan 30 sano oo khibrad ah oo la isugu keenayo dadka dhaqaajinaya iyo kuwa ruxaya ee pharma. Magaca aasaasiga ah ee warshadaha, CPhI Worldwide waa muujinta kalandarka dawooyinka oo mideeya kumanaan xirfadlayaal pharma iyo alaab-qeybiyeyaal ka kala socda adduunka oo dhan hal saqaf. CPhI Worldwide iyo dhacdooyinkeeda wadajira ee kala ah ICSE, P-MEC, FDF, InnoPack & BioProduction ayaa mid waliba loo qaybiyay aagag gaar u ah alaabada si loo siiyo qayb kasta oo warshado ah aragti dheeri ah una ogolaato martida inay si fudud u helaan oo ay ka helaan alaabada ay raadinayaan. loogu talagalay Foring wuxuu kaqeyb qaatay CPhI in kabadan 5 sano wadamo badan sida Jarmalka, Spain, iyo Hindiya.
Dhex-dhexaadiyaasha Dheehu waa badeecooyin ka hooseeya batroolka, kuwaas oo loo sii farsameeyo dalab kasta. Marka la shaqeynayo waxay u beddelaan midabyo iyo midabbo dhammaaday. 2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) waa dhisme dabiici ah. Waa midab huruud ah oo lagu milmi karo dareeraha organic. Waa dhexdhexaad muhiim u ah wax soo saarka warshadaha ee baaruud dyes. Foring wuxuu diiradda saarayaa dhexdhexaadkaan sanado badan.
Marka la eego xaaladda socota ee COVID-19, inbadan oo ka mid ah bandhigyadeennii waa la joojiyay ama dib loo dhigay. Gunaanadkani ma ahayn mid si fudud lagu gaadhay, laakiin iyada oo maskaxda lagu hayo caafimaadka iyo badbaadada bulshadeena, waxaan qaadanay go'aan firfircoon oo aan hadda ku dhaqaaqi karno, taas oo u oggolaanaysa wada-hawlgalayaashayada ganacsiga inay helaan waqti ku filan oo ay ku hagaajiyaan qorshayaashooda. Waxaan jeclaan lahayn inaan ka faa'iideysano fursaddan si aan macaamiisha cusub uga ogaanno khadka tooska ah. Sidoo kale fursad weyn bay kuu tahay inaad haysato hal alaab-qeybiye oo kale.
CPhI Frankfurt Jarmalka EXPO 2017
Waqtiga boostada: Jul-31-2020